Hyun Cute Bear Panda Shape USB Humidifier with LED Night Light (200ml) – SUNNY eSTORE
Hyun Cute Bear Panda Shape USB Humidi...
Hyun Cute Bear Panda Shape USB Humidifier with LED Night Light (200ml)
SOFIASKU: HM-HYUN-BLU-016 (S000)
Pink - 13,000 KsBlack - 13,000 KsBlue - 13,000 Ks
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ပုံစံ၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖက်ရှင်။
200 ml ဖြင့် များစွာဆန့်ပြီး၊ တစ်ညတာ စိုထိုင်းမှုထိန်းခြင်းလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး၊ ရေကို မကြာခဏ ထပ်ထည့်ရန် မလိုအပ်ပါ။
အရောင်များပြေးပြီး ဖြာထွက်နေသည့်မီးများပါပြီး၊ မိမိနေအိမ်မှာ အသုံးပြုရန်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
အိပ်ခန်းတွင်း သင်၏အိပ်စက်မှုကို အထောက်အကူပြုသလို၊ ရုံးခန်းအတွင်း အနံ့အသက်၊ ချွေးနံ့ တို့ကို လျော့ပါးစေပြီး၊ အလွန်သေးငယ်သည့်ရေမှုန်လေးများ ဖြစ်ပေါ်စေကာ၊ screen မှ ထွက်သည့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ထိသော အသားအရေကို အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးသည်။
မော်တော်ကားအတွင်း သုံးသည့်အခါ ကားအတွင်းရှိ မစီးသည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်ဖုန်များကို ဖယ်ရှား ပေးပြီး၊ ကားအတွင်း လေလည်ပတ်မှုကို ပိုကောင်းစေကာ၊ ခရီးစဉ်အတွင်း စိတ်ကို ကြည်နူးစေသည်။
Built-in smart chip ပါပြီး၊ continuous (တောက်လျှောက်) spray mode တွင် နာရီပေါင်း ၄ နာရီအ တွက် အလိုအလျောက် power ပိတ်ပေးသည့် အကာအကွယ်ပေးစနစ်ရှိပြီး၊ intermittent (ပြတ်တောင်း ပြတ်တောင်း) spray mode တွင် နာရီပေါင်း ၈ နာရီအတွက် အလိုအလျောက် power ပိတ်ပေးသည့် အကာအကွယ်ပေးစနစ်ရှိသည်။
ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် စက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကိုယ်ထည်ထိပ်ပေါ်တွင် USB expansion interface တစ်ခုပါပြီး၊ ၎င်းအား လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ကာ တီထွင်ကြံဆမှုရှိသည့်ဘဝကို ပြသသည်။
USB ညမီးနှင့် USB ပန်ကာငယ်တို့ဖြင့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိ သင့်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေး သည်။
Cute pet shape, cute fashion
200 ml large capacity, to meet the needs of overnight humidification, no need to add water frequently
Colorful gradient atmosphere lights, the best choice for home life
It will help you with sleep in the bedroom, reduce office odor, sweat odor, micron-level fine mist and moisturizes the skin affected by screen radiation
Car use can remove static electricity and dust in the car, promote air circulation inside the car, and bring good mood to the journey.
Built-in smart chip, automatic power-off protection for4hours in continuous spray mode, automatic power-off protection for 8 hours in intermittent spray mode
One machine is multi-purpose, the top of the fuselage comes withaUSB expansion interface, which can be used at will, showing creative life.
With USB night light and USB small fan, to meet your needs in different occasions
Affin Bank AliPay HK Alliance Bank AmBank Apple Pay Bank Islam Bank Muamalat Bank Rakyat BSN Bank CIMB Bank CIMB Clicks Dash eNETS Google Pay Hong Leong Bank Hong Leong Connect HSBC Bank JCB Krungsri Kuwait Finance House LINE Pay Mastercard Maybank Maybank 2U OCBC Bank PayMe Public Bank Public Bank PBe